Warar - Qiimaha Waxsoosaarka Dhirta Artifishalka ah
1. Qiimaha Waxsoosaarka Dhirta Artifishalka ah
Codsiyada kaladuwan waxay leeyihiin shuruudo kaladuwan oo qeexitaannada ah, iyo qeexitaano kaladuwan ayaa micnaheedu yahay qiime kaladuwan. Qeexitaannada ugu waawayn ayaa ah agab, dherer raso ah, cufnaan, iyo cufnaanta tolida.
Waxyaabaha Ugu Muhiimsan ee Saameyn Doonta Kharashka Doogga Artifishalka ah:
Waxyaabo badan ayaa wada shaqeeya si loo go'aamiyo qiimaha cawska macmalka ah. Maaddooyinka, miisaanka wajiga (Waxaa go'aamiya dhererka dhererka, Dtex, iyo Stitch Density) iyo taageeriddu waa saddex arrimood oo waaweyn. Tirada dalabka ayaa sidoo kale saameyn doonta kharashka wax soo saarka.
Guud ahaan marka laga hadlayo, qalabka cawska isboortiga wuu ka duwan yahay qalabka loo isticmaalo cawska dhulka. Waxaa lagu sameeyaa mudnaano kala duwan: Cawska isboortiga wuxuu diiradda saaraa waxqabadka dhaqdhaqaaqa, ilaalinta ciyaartoyga, iyo iska caabbinta xididka; In kasta oo cawska muuqaalku fiiro gaar ah u yeesho muuqaalka (Fiiri sida ugu wanaagsan cawska dhabta ah, ama xitaa ka sii fiican) caabbinta UV, iyo nabadgelyada. Ka sokow,
Dhererka dusha sare, Dtex, iyo Stitch Density ayaa si wadajir ah u wada shaqeynaya si loo go'aamiyo miisaanka wejiga. Miisaanka wajiga ayaa ah qodob muhiim ah oo saameeya waxqabadka cawska iyo qiimaha. Sababta waa iska cadahay: culeyska wajiga oo culus wuxuu ka dhigan yahay qalab badan natiijooyinkuna waa qiimo sare.
Dib-u-celinta ugu caansan waa taageerada SBR ee dahaarka leh iyo polyurethane (PU) taageerada dahaarka leh. Xirxirida Polyurethane way kafiican tahay laakiin qiimo aad u sareeya (qiyaastii USD1.0 ayaa ka sareeya halkii mitir laba jibbaaran). Taageerada caaga ah ayaa kufilan kiisaska badankood. Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taageerida, fadlan booqo boostada Xaqiiqooyinka Taageerada Dhirta Artifishalka ah.